सांस्कृतिक यात्रा ब्लग | सडकको लागि एक युगल
यात्रा को सबै भन्दा दिलचस्प भाग को सबसे अधिक कठिन योजना - वास्तविक यात्रा को योजना पनि हो। जबकि त्यहाँ कम्पनी र टेक्नोलोजीहरू जस्तो लगाउने अनन्त संख्यामा छन् जुन दावी गर्छन् वास्तवमा योजना प्रक्रिया स्वचालित रूपमा, त्यहाँ हामीले एकपटक मात्र देखेका छौं कि वास्तवमा यो - साइगिक यात्रा यात्रा योजनाकार।
उत्तम भाग? तपाइँ यो सबै मा एक गर्न सक्नुहुन्छ मोबाइल यन्त्र।
यसका लागि उनीहरुसँगको सम्बन्धको बारेमा जानकारी गराईरहनु भएको छ। यसका बारेमा जानकारी गराईएको छ। यसका बारेमा जानकारी दिईएको छ। तिमी गर्न चाहन्छौ।
सिगिक यात्रा यात्रा योजनाकार दुवै एन्ड्रोइड र आईट्यून्स अनुप्रयोग स्टोरमा भेट्टाउन सकिन्छ, डाउनलोड गर्न सजिलो र अविश्वसनीय प्रयोग गर्न सजिलो छ। कति सजिलो सबै शोध बाईपास गर्न सजिलो र भित्रको पूर्ण यात्रा कार्यक्रम छ मिनेट। तपाइँ वा पूर्व-स्थापित यात्रा कार्यक्रम प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ, वा सजिलैसँग आफ्नो स्टेलार इन्टरफेसको प्रयोग गरी तपाईको आफ्नै निर्माण गर्नुहोस् - जसको हो मुक्त एकपटक तपाईंले एप डाउनलोड गर्नुभयो।
सिगिक ट्रेवलले तपाईंलाई सजिलै कम मार्गहरू र यात्रा समय गणना गरेर यी यात्रा कार्यक्रमहरू सजिलै बनाउँदछ, र तपाईंको इच्छित भ्रमणसँग मेल खाने होटल र भ्रमणहरू सुझाव दिन्छ। जब तपाईं आफ्नो वास्तविक वेबसाइटमा हेर्न सक्नुहुन्छ maps.sygic.com, अनुप्रयोग जाँच्नु साँच्चै सबै आवश्यक छ।
सुरू गर्न सजिलो छ। एकपटक तपाईंले एप डाउनलोड गर्नुभएपछि यसलाई खोलियो, तपाईंलाई एउटा एन्टिभ स्क्रिनमा लिइनेछ जुन तपाइँले यात्रा कार्यक्रम सुरु गर्न सोध्नुहुन्छ। त्यहाँ तपाईंको बायाँ प्रोफाइल जानकारीको साथ बायाँमा एक मेनु हो, जहाँ जहाँ तपाईं हो (जीपीएस नहुनु भएको छैन!), साथै साथ नै अफलाइन म्याप्सहरू छन् जुन तिनीहरूसँग तल काम गर्दा पनि काम गर्नेछ। । हामी केहि समय Yucatan प्रायद्वीपमा भएको छ, र त्यो प्रयोग गर्न सक्छ!
बायाँ देखाइएका आगो स्क्रिन अनुसूचित भ्रमणहरू, तपाईंले अघिल्लो भ्रमणहरूमा भ्रमण गर्नुभएको छ, र तपाईंलाई रद्दीएको ट्राभरेस्टरी पुन: रद्द गर्न अनुमति दिन्छ, तपाइँ फेरि पुन: हेर्न चाहानुहुन्छ। सुरू गर्न "प्लस" बटन थिच्नुहोस्।
यहाँ रमाइलो भाग हो - यात्रा योजना! तपाईं भर्खरै शहरमा टाइप गर्नुहोस्। यस उदाहरणमा, हामी तपाईंलाई लन्डन, ईङ्गल्याण्डमा केहि दिन योजना कसरी देखाउने छौँ।
धेरै शहरहरूको लागि, तपाइँ स्वचालित रूपमा पूर्व-स्थापित यात्रा कार्यक्रमहरू देख्नुहुनेछ जुन सँगी प्रयोगकर्ताहरूद्वारा पेश गरिएको छ। तपाईंले यात्राको लम्बाइको आधारमा तपाइँलाई चाहानुहुन्छ यी सबैलाई पछाडि गर्न सक्नुहुन्छ (जहाँ पनि एक दिन र धेरै हप्ताको बीचमा)। तथापि, तपाईं माथिको बटन रोज्नुहोस् र आफ्नै आफ्नै खाली कार्यक्रमको साथ सुरु गर्न सक्नुहुनेछ। यो कुराले तपाईलाई वास्तवमा कसरी प्रयोग गर्ने बारे जान्न आवश्यक छ किनकि, हामी कसरी यो कार्यहरूको आधारभूत उदाहरण चलाउनेछौँ।
एकपटक तपाईंले स्क्रिनबाट निर्माण गर्ने विकल्प चयन गर्नुभएपछि, तपाइँ एक स्क्रिनमा आउनको लागी थोडा सूचनाको साथ आउनुहुनेछ। यसमा तपाईंको बाहिरीको योजना बनाई मितिहरू समावेश गर्दछ, जहाँ तपाइँ लन्डनमा पुग्नुहुनेछ (वा जहाँ पनि तिमी बस्ने हो), साथसाथै होटल्सको लागि खोजी! सम्पादन गर्नका लागि केवल व्यक्तिगत क्षेत्रहरूमा क्लिक गर्नुहोस्।
तपाईं कहाँ पुग्नु हुन्छ छनौट गर्नुहोस् ...
तपाईं कहाँ रहन चाहानुहुन्छ ...
र, यो स्वचालित रूपमा यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ जुन तपाईले निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ। अब, यी स्क्रिनको प्रत्येक एक साथ तपाईं विभिन्न होटेलहरूमा ड्रिल गर्न सक्नुहुन्छ, मूल्याङ्कनहरू हेर्नुहोस् र हेर्नुहोस् कि यो ठाउँ जहाँ तपाइँ रमाउन चाहानुहुन्छ।
मितिहरूमा, यो तपाईंको आधारभूत यात्रा कार्यक्रम हेर्न शुरु हुनेछ।
अब यो बस सबै सँगसँगै सँगसँगै राख्न सुरु गर्न "ट्रिप सिर्जना गर्नुहोस्" चयन गर्नुहोस्!
तपाईंलाई शहर, विभिन्न ठाउँहरू, भ्रमणहरू (बुकिङ जानकारी समावेश गर्ने), कार भाडामा, साथै शहर र सार्वजनिक यातायात जस्तै लन्डनको ट्यूबको नक्साको साथ एक नयाँ स्क्रिनमा लिइनेछ।
एपमा लन्डनमा ट्यूब प्रणालीको एक नक्सा पनि छ!
तपाईं जूम गर्न केवल दुई औंलाहरू प्रयोग गरेर शहरको नक्सामा ड्रिल गर्न सक्नुहुन्छ। तपाइँ सजिलै संग होटलमा नजिकको क्षेत्रहरूमा लक्षित गर्न सक्नुहुनेछ ताकि तपाईसँग वास्तवमा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने एक सामान्य विचार छ! साथै, तपाईं नजिकैका पसलहरू, रेस्टुरेन्टहरू, वा यहाँका केही पनि भेट्टाउन सक्नुहुनेछ प्रसिद्ध लन्डन पब.
जब तपाईं यात्रा कार्यक्रम थप्न चाहानुहुन्छ केहि कुरा देख्नुहुन्छ, यसले तपाईंलाई सामान्य विचार दिनेछ जुन वास्तवमा यो भ्रमण गर्न लामो समय लाग्छ। यस उदाहरणमा, बिग बेन केवल नीलो पट्टी द्वारा देखाएको छ, केवल 15 मिनेटको बारेमा हेर्न सकिन्छ।
त्यस दिन चयन गर्नुहोस् जुन तपाईं उत्साह थप्न चाहानुहुन्छ ...
र, अब तपाईं आधिकारिक रूपमा यात्रा कार्यक्रमको निर्माण गर्नुभएको छ!
तपाईं प्रत्येक दिन टुक्राहरू र यात्राहरू थप्न जारी राख्न सक्नुहुन्छ, र एउटा छ तुरुन्तै तपाईं कति दिनको अनुमान उस दिनको लागि यात्रामा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ। थप्नु भएकोमा जारी राख्नुहोस्, तपाईंले थप्न चाहानु भएको सबै थप गर्नुभएको छैन।
अन्यथा, तपाइँ पूर्व-निर्मित यात्रा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै "यो एक दिनमा लण्डनको सर्वश्रेष्ठ"। तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ, यसमा 19 स्थानहरू समावेश गर्दछ, लगभग XNUM घण्टा घण्टा लाग्छ, र सबै यात्राहरूको सूची समावेश गर्दछ - जस्तै टॉवर ब्रिज, टाउन लन्डनको, टवर हिल, र हवेली हाउस।
अनुप्रयोगको साथ, तपाईं पनि शहरको सामान्य भिडियो भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ अन्तरक्रियात्मक, र आफ्नो हात संग सार्नुहोस्। यसले तपाइँलाई प्रायः कुनै उत्साह वा ल्यान्डमार्कबाट शहरको 360 डिग्री दृश्य प्रदान गर्दछ!
एकपटक गरेपछि, केवल आफ्नो यात्रा कार्यक्रम सुरक्षित गर्नुहोस् र त डाउनलोड गर्नुहोस् वा साथीहरूसँग साझेदारी गर्नुहोस् र साथीहरूलाई यात्रा गर्नुहोस्!
यो त्यहाँ छ, र केहि मिनेट भित्र तपाईं कुनै पनि ठाउँ मा आफ्नो आफ्नै यात्रा कार्यक्रम बनाउन सक्नुहुन्छ, हजारौं मील दूर। महँगो यात्रा एजेन्सीहरूमा खर्च नगरी पैसा, कुनै अनन्त घण्टा गतिविधिहरू शोध गर्ने, केवल शुद्ध यात्रा!
नोभेम्बर 5, 2019 + अमेरिकी, खाद्य र पेय, उत्तर अमेरिका, व्यञ्जनहरु
समय समय15 मिनेट
कुक समय55 मिनेट
पाठ्यक्रम: प्रवेश, मुख्य पाठ्यक्रम
सर्भरहरू:4मान्छे
3 कपहरु बार्बेक्यु सस बोतल
1 /2कप गुनासो
1 /2कप केचप
1 /4कप साइडर सिरका
3 tablespoons खैरो रायोको राई
1 चम्मच लसुन पाउडर
1 /4चम्मच केनी मिर्च
3 पाउन्ड हड्डी भित्र छालामा कुखुराको टुक्राहरू (स्तन, सम्पूर्ण खुट्टा, फिला, र / वा ड्रमस्टिक), छाँटिएको र स्तनहरू आधी
चटनीको लागि: मध्यम सॉसप्यानमा सबै सामग्रीहरू ह्वाइस्क गर्नुहोस् र मध्यम-उच्च तातोमा उमालेर ल्याउनुहोस्।
मध्यम तातोमा कम गर्नुहोस् र सास गाढा र3कपमा लगभग 20 मिनेट सम्म कम बनाउनुहोस्। (सॉस एक्सट्युमक्स हप्ता सम्म एयरट्याट कन्टेनरमा फ्रिज गर्न सकिन्छ।)
कुखुराको लागि: सानो कचौरामा नुन, मिर्च, र लाल मिर्च मिक्स गर्नुहोस्। प्याट चिकन कागजको तौंलीको साथ ड्राई र मसलाको मसलाको मिश्रण पूरै कुखुराको टुक्राहरूमा।
ग्रिलमा तल वेंट खोल्नुहोस्। चारकोल ब्रिकेटसँग भरिएको लाइट ठूलो चिम्नी स्टार्टर (लगभग कोसेन्ड जलेको कोइला जलेको कोरेको कोठा ग्रे खरानी खरानीले सम्म कभर हुँदैन।
13 राख्नुहोस्9इन्च डिस्पोजेबल एल्युमिनियम भुन्ने प्यान ग्रिलको एक तर्फ र ग्रिलको अर्को पट्टिमा समेत कोइला खन्याउनुहोस्।
ठाउँमा खाना पकाउने ग्र्याट सेट गर्नुहोस्, कभर गर्नुहोस्, पूर्ण ढक्कन भेन्टहरू, र5मिनेटको लागि ग्रिल तताउन दिनुहोस्। Scrape कुकुरको सफाई सफा।
तेल ग्रिट गर्नुहोस् र चिकन छालाको छेउ तल ग्रिलको कूलर साइडमा राख्नुहोस्।
कभर, कुखुरामा आधा खोलेको ढक्कन भेन्ट्सको साथ, र कुखुरा ब्राउन हुन थाले सम्म पकाउनुहोस्, 30 बाट 35 मिनेट। कुखुराको कोइलामा एकल लाइनमा सार्नुहोस्।
2 कप सासको साथ ब्राउन सुरु गर्नुहोस् र5मिनेटको बारेमा 20 कप सासहरू प्रत्येक XNUMX मिनेटमा टाँसिनुहोस्।
कोइलामा कुखुराको टुक्राहरू स्लाइड गर्नुहोस् र कुखुराको मासुको ब्रश गर्न जारी राख्नुहोस् सम्म कुखुराको चटनी क्रस्ट हुँदैन र स्तनको मासुको आन्तरिक तापमान 165 डिग्री र खुट्टा, फिला, र ड्रमस्टिकहरूले 175 डिग्री, लगभग5मिनेट दर्ता गर्दछ।
प्लेट्टरमा कुखुरा स्थानान्तरण गर्नुहोस्, पन्नीको साथ पाल बनाउनुहोस्, र 10 मिनेट आराम दिनुहोस्।
पन्नी हटाउनुहोस् र सेवा गर्नुहोस्, टेबुलमा बाँकी ससलाई पार गर्दै।
नोभेम्बर 2, 2019 + अष्ट्रेलिया, युरोप, ओशिनिया, यात्रा योजना
सिडनी निश्चित रूप देखि संसारमा सबैभन्दा सुन्दर पर्यटक पर्यटकहरू मध्ये एक छ, जुन सबैलाई कम्तिमा एक पटक भ्रमण गर्नुपर्छ। अझै पनि, सिडनीको यात्राको योजना बनाउँदा सबैभन्दा ठूलो समस्या, खास गरी कसैले7वा 10 दिन भन्दा कम लिन्छ कि तपाइँ धेरै धेरै अचम्मका अनुभवहरूमा छुट्न सक्नुहुनेछ। यो हो, जब सम्म तपाईं आफ्नो यात्रा कार्यक्रम योजना छैन ताकि तपाईं यस अचम्मको शहरमा सबै भन्दा राम्रो क्षणको रूपमा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
जबकि यो गाह्रो हुन सक्छ, यो निश्चित रूपमा सम्भव छ। यो मनमा संग, यहाँ खर्चको लागि हाम्रो अन्तिम गाइड हो सिडनीमा पाँच अविस्मरणीय दिनहरू.
एक दिन: एक हिडको साथ सुरु गर्नुहोस्
सिडनीमा तपाईंको गर्नका लागि सूचीमा पहिलो कुरा निश्चित रूपमा शहरमा पैदल जान्नुपर्दछ। तपाईले आफ्नो मार्गलाई स्थानीय वा यहाँका व्यक्तिहरूको सिडनीहरूको साथमा सिडनी भ्रमण गर्नुभएका सुझावहरूको खोजी गर्न सक्नुहुनेछ वा नक्सामा एक नजर लिन सक्नुहुनेछ र आफ्नै आफ्नै योजनाको साथ आउन सक्नुहुनेछ। गुगल नक्शाको साथ, तपाईं आफ्नो होटल को आसपास आसपास सबै रोचक स्थानहरू हेर्न र त्यसपछि तपाईका भ्रमण गर्ने सबै नजिकका स्थानहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसोभए, तपाईं यी सबै स्थानहरूको सूची संख्यात्मक रूपमा बनाउन सक्नुहुन्छ, त्यसैले तपाईंले पूर्ण सर्कल बनाउनुहुन्छ।
एक सुझाव सर्कुलर क्वेमा सुरू गर्न र त्यसपछि रक्स जिल्लाको माध्यमबाट अगाडि बढ्नु हो। यसले तपाईंलाई कम्तिमा सिडनीको प्रतीकात्मक ल्यान्डमार्कहरू जस्तै ओपेरा हाउस र हर्बर ब्रिजमा एक छेउमा हेर्न अनुमति दिन्छ। यहाँबाट तपाई शहरी केन्द्रमा जान सक्नुहुन्छ।
दुई दिन: केही चित्रहरू लिनुहोस्
तपाईंको भ्रमण भ्रमणले दिनको समयमा चित्रका रूपमा दुईवटा स्थायी म्यामेन्टहरू सिर्जना गरेको हुन सक्छ, तर यो एक सुझाव माथिको सुझाव लिनको लागि हो। तपाईलाई के गर्न आवश्यक छ एकदम सही ठाँउ पाउन र त्यहाँ धेरै निश्चित तपाईं भ्रमण गर्न आवश्यक छ। पहिलो, तपाईंलाई सिडनी स्काईवाल्क चढ्न आवश्यक छ र यहाँबाट फोटोहरू लिनुहोस् जुन कुनै संदेह छैन सिडनीको महानगरीय क्षेत्रको अधिक संख्यामा।
अर्को, तपाई चाहिए माथि उल्लेख गरिएको सिडनी हार्बर ब्रिज मा चढेर र शीर्ष मा एक स्वामी लिनुहोस्। न केवल यो तपाईंको शोषण को प्रमाण प्रदान गर्दछ (जब तपाइँ यसलाई फेरि पुन: रमाईलो घर फिर्ता गर्नुहुनेछ) तर यो यात्राको स्थायी मेमोरी पनि हुन सक्छ।
दिन तीन: संस्कृति, कला र इतिहास
एकपटक तपाईंले आफ्नो वरिपरि घुसाउनुभयो र केहि तस्विर लिनुभयो, यो सिडनी बारे कुरा वा दुई कुरा सिक्न सही समय हुन सक्छ। कतिपय केहीले क्रिम गर्न मन पराउँछन् एक संग्रहालय वा दुई मा जानुहोस् उनीहरूको दिन-एक ट्राफिक समयमा, यो सँधै नयाँ स्पेशल दिनलाई नयाँ साउथ वेल्स, हाइड पार्क ब्रेक संग्रहालय र सिडनी पर्यवेक्षकको कला ग्यालरीको लागि छुट्याउनु राम्रो हुन्छ।
भन्नको लागी, केवल यी तीन स्थानहरूको भ्रमण तपाईले कुनै इतिहासको इतिहास भन्दा राम्रो शहरको हृदय र आत्माबारे सिकाउनुहुनेछ।
दिन चार: हंटर घाटी वाइन स्वाद दौरे
यो सिर्फ सही छैन यदि तपाईं अद्भुत हंटर घाटी को भ्रमण को अवसर मा सम्झना बाहिर, दूर छैन सिडनी। अझै पनि, यो लगभग एक घण्टा र आधा घन्टाको ड्राइव हो, यसैले तपाइँ आफ्नो सम्पूर्ण दिन यसलाई समर्पण गर्न चाहानुहुन्छ।
यसबाहेक, यदि तपाईं आफ्नो लक्षित स्थानमा सवारी चढाउने योजना बनाउनुहुन्छ भने, तपाइँ अघि जानुहुन्छ कि तपाइँ एक छिटो रखरखाव जाँच गर्नुहुन्छ। बस नजिकैको मोबाइल मेकानिक फेला पार्नुहोस् र तिनीहरूलाई सोध्नु अघि आफ्नो कारलाई हेर्नुस्। जो पूर्ण-दिनको दौरेमा लगाउनेहरूका लागि, त्यहाँ शराब स्वादहरू, दिइने प्रक्रियाको अवलोकन र निश्चित रूपले एक चपचाप खानेकुरा हो।
दिनको पाँच: द हिट मार
अन्तमा, तपाईंको अन्तिम दिन यो अष्ट्रेलिया महानगरीय महानगरीयमा, तपाईंले आफ्नो सबैभन्दा सुन्दर सम्पत्तिको आनन्द उठाउनुपर्छ - यसको अद्भुत समुद्र तट। यहाँ, तपाईं पूरा दिन टेनिंग खर्च गर्न सक्नुहुन्छ, कसरी सिक्न वा ह्याङ्गओभरबाट पुनः प्राप्त गर्ने सिक्नु हुन्छ तपाईंको शराब भ्रमणमा स्वेच्छाको रूपमा।
सूची अनन्त छ, बाण्डी, एभलोन र तामारमा सँगै केहि उपलब्ध विकल्पहरूको रूपमा सेवा गरिरहेका छन्। आदर्श रूप मा, तपाईं आफ्नो होटेल को नजिकै एक नजदीक चुन्नुहोस या आफ्नो आखिरी दिन को समयमा पनि धेरै मा जाएँगे।
जबकि यो यस अद्भुत शहरमा सबै चीजबाट टाढा हुन सक्दछ, प्रत्येक दिनको लागि योजना सिडनीको बारेमा केहि नयाँ सिकाउने र तपाईंलाई पुरा तरिकाले नयाँ अनुभव प्रदान गर्ने हो। सबै चीजको लागि तपाईले छुटेको छ, ठीक छ, त्यहाँ सधैं दोस्रो पटक छ।
अक्टोबर 28, 2019 + एपेटाइजर, इनपुट, युरोप, खाद्य र पेय, व्यञ्जनहरु, रूस, रूसी
पिरोश्की (मूल रूपमा जब उच्चारण गरिएको रूपमा पिरोज्की) परम्परागत रूपमा रसियाको भाँडा हो जुन बुनख, हंस, र खरायो जस्ता मासुले भरणमा प्राथमिक प्रोटिनको रूपमा बनाएको थियो। सामान्य प्रयोगमा त्यस्ता प्रकारका मीटको अभावमा, यो विधि (र प्राय जसो सामान्यतया प्रयोग गरिन्छ) गोमांस र बन्दकोबीको मिश्रणको साथ बनाईन्छ।
तिनीहरू चावल, विभिन्न तरकारीहरू र मसलासँग मिसाउन सकिन्छ र दुवैलाई एपेटाइजर र एन्ट्री मानिन्छ - जहाँ तपाईं खाँदै हुनुहुन्छ र जसको साथ तपाईं खाइरहनुभएको छ!
पाठ्यक्रम: एपेटाइजर, एन्ट्री
1 1 /2कपहरु प्लस2चम्मच वनस्पति तेल
2 कपहरु पातलो काटिएको बन्दकोबी
1 /2कप कडा कटा प्याज
1 /2पाउन्ड जमीन मासु
3 /4चम्मच सुक्खा डिल
1 /2चम्मच लसुन पाउडर
3 /4चम्मच नमक
1 /4चम्मच काली मिर्च
1 16 oz प्याकेज रेफ्रिजरेटेड फ्लाकी लेयर बिस्कुटहरू
मध्यम गर्मीमा ठूलो स्किलेटमा, तातो2टेबलस्पून तेल; गोभी र प्याज5लाई7मिनेट सम्म वा गोभी झर्ने गरी पाउनुहोस्।
गोभी मिश्रण एक कचौरामा राख्नुहोस् र अलग राख्नुहोस्।
मध्यम-उच्च तातोमा उही स्किलेटमा, ग्राउन्ड गोमांस5मिनेट पकाउनुहोस् वा खैरो नहोउन्जेल, कुनै पछाडि भरेर पकाउँदछ; तरल निकाल्नुहोस्।
गोभी मिश्रण स्किलेटमा फिर्ता जोड्नुहोस्। डिल, लसुन पाउडर, नुन र मरिच मा चलाउनुहोस्; राम्रोसँग मिक्स।
प्रत्येक बिस्कुट बिस्तारै आधा मा तान्नुहोस्, 16 सपाट घेरा बनाउँदै।
तपाईंको औंलाहरूका साथ, प्रत्येक सर्कललाई3-इन्च इन्च गोला व्यासमा समतल गर्नुहोस्। 1 मासुको मिश्रणको ठूलो चम्मच आटाको प्रत्येक टुक्राको बीचमा राख्नुहोस्।
आधा मासु मा आधा मा गुना आटा गुना, आधा चन्द्र आकार को गठन, र दृढतापूर्वक मुहर गर्न किनारों पिन्च।
मध्यम-उच्च गर्मीमा गहिरो स्किलेटमा, तातो 1-1 /2कपको तेल तातो तर धुम्रपान नभएसम्म।
यो 350 डिग्री एफ को बारे मा हुनु पर्छ।
भरिएको आटा तेलमा राख्नुहोस् र ब्याचहरूमा 1 देखि2मिनेट प्रति साइड वा गोल्डन ब्राउन सम्म पकाउनुहोस्। कागज तौलिया-लाइनर प्लेट्टरमा स्ल्टेड चम्चाको साथ हटाउनुहोस्।
न्यानो सेवा गर्नुहोस्।
हेलोवीन साजिशको सबै भन्दा गहिराइ बाहिर निस्कन्छ, किनकी यसले प्रतीक हामीलाई रहस्यमय, मैकब्रेको खुल्यो, र असम्भव लाग्दछ - यदि पनि एक रातको लागि। यो के हो कि हेलोवीन पनि यात्रा गर्न को लागि एक महान छुट्टी हो, खासकर यदि तपाईं एक ऐतिहासिक यूरोपीय शहर मा भयानक साहसिक को रात मा देख रहे हो र संग कनेक्ट हेलोवीनको आधार र छुट्टी कसरी सुरु भयो!
हेलोवीन मूलतः एक युरोपेली परम्परा हो, सामहन को प्राचीन केल्टिक त्योहारबाट प्रेरणा बनाइन्छ, जहाँ मान्छे भूत र दुष्ट आत्माहरु को रक्षा गर्न को लागी बोनसहरु लाई लुगा लगाएर लुगा लगाउनेछ। हेलोवीन सीजन सममन को परम्परा मा गर्मी को अन्त्य संग संगत भयो, र यसैले फसल को साथ साथै अंधेरे, ठंड सर्दियों को शुरुवात, र साल को प्रतीक "मृत्यु" को शुरुवात भयो। सेल्सले विश्वास गरे कि "नयाँ वर्ष" भन्दा रातको रात, जीवित र मृतकको संसार बीच सीमा, यसले जडान गर्न र अर्को पक्षसँग कुराकानी गर्न सम्भव बनाउँछ। यसरी, हेलोवीन जन्मेको थियो।
त्यसैले मौलिक हेलोवीन यूरोप हो, वास्तवमा, सामहन को परम्परा भन्दा बढी पत्ता लगाउन सकिन्छ पाँच हजार वर्ष! यसका प्रमाणहरू आयरल्यान्ड (आयरल्याण्ड (बनाइएको सर 3000 ईसा पूर्व) मा देख्न सकिन्छ, जुन सामहनमा सूर्योदयको दृश्य र संरेखणमा निर्माण गरिएको थियो। 18 शताब्दीमा उत्तरी अमेरिकामा छुट्टीको प्रसार पछि, परम्पराहरू, प्रतीकहरू, र लोकगीतहरूले मात्र रहस्यमा थपेका छन्, तर युरोपले हेलोवीनको ठाउँ बन्न बाँकी छ!
यहाँ हाम्रो केही मनपर्ने ठाउँहरू वर्षको सबैभन्दा अँध्यारो, प्यारी छुट्टीमा भ्रमण गर्नको लागि यहाँ छन्!
लन्डनको प्रेत इतिहास राम्रो तरिकाले दस्तावेज गरिएको छ, अलौकिक कथाहरु र उब्रु-आपराधिक कथाहरु द्वारा पकडे। यो सबै को शुरुवात र जैक र रिप संग अन्त्य छैन, तथापि, टवर को प्रसिद्ध स्थल जस्तै लन्डन आफ्नै आफ्नै भूतपूर्व कथाहरू घमन्ड गर्नुहोस्। टाउवर एनी बोलेन को भूत द्वारा प्रेतवाधित हुन भनिएको छ, 1536 मा टावर ग्रीन मा, साथै साथ अन्य अन्य शाही प्रस्तुतिहरुमा सिरिया।
लन्डनको धेरै मध्ये धेरैलाई जाँच गर्नुहोस् हेलोवीनमा प्रेतवाधित यात्रा, डुनेंस लण्डन टूर द्वारा प्रस्तावित प्रेतवाधित लन्डनको भ्रमण जस्ता।
फोटो शिष्टाचार राहेल अल्टर
एक शब्द - Catacombs। यो हानिकारक हो कि हेलोवीन कुनै ठाउँको लागि सही अवकाश हो भने विश्वास गरिरहेको छ भने पर्खालहरू खोप लागेका छन्, होइन? खूनी को केन्द्र मा शहर फ्रान्सेली क्रांतिले प्रेतवाधित कथाहरूको साझा गरेको छ, र तिनीहरूमध्ये धेरै पछि-प्रेतित Catacombs मा आउछन्, जो रातो यात्राहरू (हेलोवीन सहित) प्रदान गर्छन्।
यदि तपाइँ पेरिसको प्रेत इतिहासको व्यापक भ्रमणको खोजी गर्दै हुनुहुन्छ भने, भ्रमण गरिएका भ्रमणहरू हेर्नुहोस् डार्क पेरिस। तिनीहरूको वेबसाइटको रूपमा, "यो पिशाच र घोस्ट चक्रले तपाईंलाई अँध्यारो पेरिसको माध्यमबाट ल्याउँछ र तपाईलाई एक वैकल्पिक अनुभव दिन्छ, जसले तपाईंलाई पेरिस हेर्न अनुमति दिन्छ कुनैपनि कम्पनीको कुनै पनि कम्पनीले प्रकट गर्दैन।"
यसलाई अझ राम्रो भन्न सकिँदैन।
ड्रेकुलाको घर - जहाँ तपाईं किन टाउकोमा टाढा र टाढाको भ्रमण गर्नु भन्दा बरु हुनुहुन्छ।
व्लादि टेप्स, 15 शताब्दीमा वालचियाको निर्दोष शासक र ड्रेकुलाको किंवदंती पछिको वास्तविक व्यक्ति, व्लाण्ड इम्पालरको रूपमा चिनिने थियो किनभने उनको हानिकारक रणनीतिले उनीहरूको शत्रुलाई महान् संख्यामा आफ्नो महल सम्पदामा ठूलो असर पार्छ। यो "शैतानको छोरो" पछिको अन्धकार इतिहासले थुप्रै कथाहरू प्रेरित गर्यो, जसमा ब्राम स्टोकरको पनि शामिल छ ड्रेकुला, र बुखारेस्ट ड्रेकुला किंवदंती को आसपास केन्द्रित धेरै प्रेतवाधित यात्राहरु प्रदान गर्दछ। तपाईं आफ्नो नाम पनि एक वार्षिक प्रतियोगिता को लागि जो तपाईं एक हेलोवीन पोशाक पार्टी को लागि महान भव्य एम्पाइलर को पूर्व महल मा निमन्त्रणा गर्न सक्छन्।
यदि तपाईं चाहानुहुन्छ भने, बुखारेस्टको उत्तर उत्तर "ट्रांसिल्वेनिया" र टूरमा सुरू हुन्छ ब्रेनको क्यासल - महल जसले स्टोकरको भयानक उपन्यासलाई प्रेरित गर्यो।
एडिनबर्ग यो यति पुरानो हो छ हानेको छ। चिन्ता नगर्नुहोस् - यो हो।
गॉथिक र मध्ययुगीन वास्तुकलाले शहरलाई बेवास्ता गरेको छ जसले यसलाई भूतपूर्व लोकगीतको उचित हिस्सा देखेको छ, जसमा प्रायः मृत टूर को एडिनबर्ग शहर। एडिनबर्ग क्यासल भ्रमण गर्न निश्चित गर्नुहोस्, साइटको जुन येशूका समय पूर्व-मितिहरू र हजारौँ दृश्यहरू छन्, ती शताब्दीहरू भरमा धूर्त लडाइँहरू छन् - सबै तिनीहरूका आफ्नै छापको पछि लागे।
सामन मनाउने मूल देशहरू मध्ये एक हुनाले, तपाइँ एडिनबर्गले हेलोवीन परम्परामा लामो समय र छुट्टी मनाउन एक महान ठाउँ पाउनुहुनेछ।
डब्लुल्लिनले गहिरो इतिहास, पुरातन विज्ञान र लोकगीतको साथसाथै पूर्ण पुराणको इतिहासमा केन्द्रीय शहरको भित्तामा राखेका छन्, जसले यसलाई हेलोवीन गन्तव्यको रुपमा उभिरहेको छ।
पौराणिक लेखकको जन्मस्थान ड्रेकुला, ब्रैम स्टोकर, डबलिनले छुट्टी मनाउँदछ कि युरोपमा कुनै पनि शहर छैन। एकल पर्छ के छ Bram Stoker Festival, हेलोवीन प्रत्येक वर्ष हप्ताको अन्त्य भन्दा अघि, जहाँ लेखकको जीवन मनाईन्छ र त्यो छुट्टी जुन धेरै भन्दा नजिकको आफ्नो सबैभन्दा सचेत कामको साथमा परिणत गर्दछ।
यसको अतिरिक्त, तपाईं महल को धेरै प्रचलित यात्राहरु र शहर को माध्यम ले जादुई प्राचीन पबहरु को पा सकते हो, तर बाहिर को जाँच को लागि सुनिश्चित गर्नुहोस नर्क फायर क्लब डब्लुल्लिन पर्वतमा - रिक्तितिक बलिदानको ठाउँ र भूतपूर्व क्रियाकलापको होस्ट गर्नु भएको थियो!
यदि तपाइँ हेलोवीनलाई प्रामाणिक, सुन्दर, र थोरै भयानक रूपमा मनाउन ठाउँ खोजिरहनुभएको छ भने यी शहरहरूले केवल तपाईलाई खोज्नु भएको चलनहरू मात्र दिनेछ, तर तपाइँलाई प्रेमी छुट्टीको शुरुवात पछि केही वास्तविक अन्तर्दृष्टि प्रदान गर्नुहोस्। सबै माया - हेलोवीन!
यात्रा एक विस्तृत विविधता शब्द हो, यसको मतलब फरक मान्छे को लागि विभिन्न मान्छे। केहीको लागि यो एक वर्षको लागि ब्याकप्याकबाट बाँचिरहनुको मतलब हो, अरूको लागि यो पन्तवारको लागि प्यारा रिसोर्ट मा रहन सक्छ।
जुन तपाईंको बजेट र तपाईंको शैली पनि, सम्भावना एक कुरा हो कि सबै यात्रीहरू मा सहमत हुन सक्छन् - यो थकित हुन सक्छ। साँच्चै थकित।
विभिन्न खाद्य पदार्थहरू, नयाँ गन्ध, बिछाउने भाषाहरू, लामो-दूरीको बसहरू, गर्मी, निरन्तर सौदा र यहाँ पनि सबै मुस्कुराउन सक्दछन्। तैपनि कहिलेकाहीँ सडकमा तपाईं कसरी थकित हुनुभयो तपाईं अझै पनि रातमा सुत्न गाह्रो हुन सक्नु हुन्छ।
यो सत्य हो कि तपाईं मोरक्को को रेगिस्तान ताराहरु मा वा एक मा बन्द गर्न प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ jअङ्क हाउ ला बे मा वियतनाममा।
सौभाग्य देखि एक मौसमी यात्री र गरीब स्नेहक को रूप मा मैले केहि प्रयास गरे र परीक्षण सुझाव दिए छ कि तपाईंलाई बेहतर नींद प्राप्त गर्न मा मदद चाहिए कि तपाईं कहाँ हो। तल फेला पार्नका लागि तल पढ्नुहोस् ...
Resting को लागि Accessorize
यो शायद मेरो शीर्ष टिप हो, मुख्य रूपले यो यो धेरै सजिलो छ र यसको प्रभाव धेरै ठूलो हुन सक्छ। जब तपाइँ सधैँ यात्रा गर्नुहुन्छ, र मेरो मतलब सधैं कानुनी कुकुरहरू र आँखाको मुखौटा लिनुहोस्। यी दुई हल्का र अत्यन्त सस्तो सामानहरूले मेरो सम्झनालाई थप अवसरमा बचाउनुको भन्दा भन्दा मैले सम्झना राखेको छु।
आँखामा मुखौटा र कानप्लग कुकुरहरूको हॉस्टल छात्राघरको कोठामा प्रायः यसो भन्न सकिन्छ। Creaky bunks र महाकाव्य किनारहरू सबै राम्रो प्लग को साथ ब्लक गर्न सकिन्छ। र अशुद्ध रोशनीको निरन्तर चालू / बन्द रूपमा नुहाउने भित्ताहरू छालामा फर्किन्छन् कालो बादलमा झुन्ड्याउन सकिन्छ।
यो केवल छाला कोठाहरूमा छैन कि यी दुइटा सरल सामानहरूले तपाईंको निद्राको बेकनलाई बचाउन सक्छ, मैले उच्च-अन्त रिसोर्ट्समा बसेर पर्दाको साथमा धेरै पछाडि राखेको छु जुन चन्द्रलाइटले सागरलाई शेखरले मलाई जागृत बनाएको छ। त्यस्तै, बस किनभने तपाईं कहाँ हुनुहुन्छ जहाँ बियर को लागत $ 10 $ 1 को बट्टा एक बोतल हो, यसको मतलब छैन कि तपाईंको छिमेकी कुनै पनि अधिक शासी हुनेछ। तिनीहरूले अझै पनि छाला हुन सक्छ र XNumXam मा ट्युन माथि क्रंच गर्न सक्छ।
सधैं खराब र पहुँचको लागि तैयार रहनुहोस्।
तपाईंको अनुसन्धान गर्न
यदि तपाईं जान्नुहुन्छ भने तपाईं सडकमा खराब रूपमा सुत्नुस् र आफ्नो अनुसन्धान गरेर ठीक तरिकाले खराब रातको प्रयास गर्नुहोस्। इन्टरनेट तपाईको साथी यहाँ छ। तपाईंले रातको लागि आफ्नो बिस्तार बुक गर्नु अघि अरूलाई बायाँका समीक्षाहरूको राम्रो पढ्न छ। यदि तपाईंले 'पार्टीको लागि कस्तो उत्कृष्ट स्थान' को रेखामा टिप्पणी देख्नुहुन्छ! वा 'म विश्वास गर्न सक्दिन कि बरु कसरी सस्तो थियो!', त्यसोभए अवधारणाहरू तपाईका मनपर्ने आवास एक उच्च आवाज हुन सक्छ।
त्यसै गरी जाँच गर्नुहोस् कि यदि तपाईंको सम्भावित स्थान रहनको लागि उनीहरूको आफ्नै वेबसाइट हो। यदि तिनीहरूले आफैलाई 'शहरमा संख्या एक पार्टी स्थान' को रूपमा स्पष्ट रूपमा स्पष्ट रूपमा स्पष्ट रूपमा उचाल्छन्। फ्लोप्साइडमा, यदि उनीहरूले उल्लेख गरे कि तिनीहरू एक कर्फव वा एक -क्सी रक्सी नीति हो भने तपाईंले निश्चित हुन सक्नुहुनेछ यो यो एकदम कम शान्त हुन जाँदैछ।
राम्रो आराम प्राप्त गर्न थप सल्लाहको लागि, घर वा विदेशमा, के पत्ता लगाउनुहोस् विशेषज्ञहरूले यो कुरामा भन्नुपर्दछ सोनी सल्लाहकार मा।
लामो समयसम्म एक रेल वा बसमा बसिरहेको बेला तपाइँलाई थकित महसुस गराउन यो व्यायामको रूपमा योग्य छैन। यही तपाईंको होंठहरूमा धेरै कट्टरहरू उठाउनका लागि जान्छ।
जब हामी यात्रा गर्छौं हामी प्रायः हाम्रो शारीरिक स्वास्थ्यलाई बेवास्ता गर्दछौं। कुन शर्म भनेको हो भने तपाईले बोक्रामा हिसाब गर्दा तपाईलाई सचेत शरीर थकाउनु भन्दा राम्रो सुत्न मद्दत गर्नेछ। यदि तपाईं पूलको वरिपरि विशाल समुद्र तटमा आराम गर्ने बित्तिकै भने, निश्चित गर्नुहोस् कि तपाई कम्तिमा 30 मिनेटको व्यायाममा तपाईंको दिनमा निर्माण गर्नुहोस्।
म साँच्चै हेरचाह गर्दैन कि यो केवल निश्चित छ कि तपाईं साँस देखि थोडा बाहिर पाउनु हुन्छ। समुद्र तटमा एक जोगको लागि जानुहोस्, एक किक भाडामा, पहाडमा त्यो मन्दिरमा चढेर, एक नृत्य वर्गमा उपस्थित, स्थानीय बच्चाहरूसँग फुटबल खेल्नु, छुट्टीको रोमांस खोज्नुहोस् र व्यस्त हुनुहोस्। मलाई परवाह छैन कि हरेक दिन केहि व्यायाम गर्छन। सौभाग्य देखि तपाईं यात्रा गर्दा अभ्यासको लागि विकल्प अनन्त र अनन्त मनोरञ्जन गर्दै छन्।
तपाईंको आहार हेर्नुहोस्
यात्रा को बारे मा सबै भन्दा राम्रो चीजहरु खाना र पेय हो। यो अक्सर प्रायः सस्तो र सस्ता घर भन्दा कम हुन्छ र यो निरन्तर संघर्ष हुन सक्दैन कि ओभरसिल्ज गर्न। चिन्ता नगर्नुहोस्, म तपाईंलाई राम्रो चीज छोड्न र सलादमा चिपकाउन भन्नु हुन्न। म राक्षस होइन!
म तपाईंलाई बताउन चाहन्छु जब तपाईं खान र पिउन केहि खानाहरू धेरै महत्त्वपूर्ण छ जब यो सुत्न आउँछ के तपाईं उपभोग गर्नुहुन्छ। जहाँ पनि सम्भव नहुनुहोस् वा दुई घण्टा वा दुई घण्टामा प्रोटीन भारी भोजन हुनुहोस्। ती अर्जेन्टिनेशियन स्टिकहरू स्वाद अचम्म छ तर तिनीहरू धेरै पाईन्छ। तलको तल जाने सबै संग यो तपाईंको शरीर निद्रा लाग्न संघर्ष गर्न आश्चर्यजनक छैन।
त्यसै गरी तपाईं के पिउन सक्नुहुन्छ, धेरै देशहरूमा कफी कफी संस्कृति छन्, तर यदि तपाईंको शरीर एक दिन चार एस्प्रेसोसहरूमा प्रयोग गरिएको छैन भने, तपाईं घण्टार र हराएको घण्टाको घण्टा तिर्नु भएको छ। बाहिर हेर्नुहोस् कि धेरै ककटेलहरूले क्याफिन समावेश गर्दछ।
म बोलाउँदैनन्, माईन नगर्ने, म बस सही समय मा लिप्त छु।
ठीक छ, त्यहाँ तपाईंसँग छ - चार माथि सुझावहरू तपाईंलाई सडकमा थोडा अधिक छटे प्राप्त गर्न मद्दत गर्न। आशा छ कि थोडा र बाकी संग तपाईं एक राम्रो जीवनकाल यात्रा मा एक पल्ट आनंद उठाउन सक्षम हुनेछ।
अक्टोबर 14, 2019 + युरोप, नि: शुल्क आकर्षण, नि: शुल्क कुराहरू, स्पेन
बार्सिलोना आफ्नो कला र वास्तुकलाका लागि चिनिन्छ, तर शायद सस्तो चीजहरूको लागि होइन। The एंटोनी गौडीका प्रसिद्ध कार्यहरू यी वास्तुगत चमत्कारमा समावेश छन्, तर यस भन्दा बढि शहरमा यो छ! बार्सिलोना एक जीवन्त स्थान हो, संस्कृति, आकर्षण, ईतिहास, र गतिविधिहरूको पूरा। यो एक मनमोहक समुद्री किनार शहर हो जुन तपाईले यात्रा गन्तव्यमा चाहने सबै कुरा प्रदान गर्दछ, र त्यसपछि केहि।
पर्यटक र स्थानीयहरू एकैसाथ ला रम्ब्ला, क्याथेड्रलको सुन्दरतामा आर्किटेक्चरल बुफहरू देखाउँछन्, कलाप्रेमीहरू पिकासो संग्रहालयमा ओइलाउँछन् र समुद्री किनारमा बमहरू भूमध्यसागरको किनारमा हुन्छन्। र के कारण बार्सिलोना अझ बढी आकर्षक र रमाईलो बनाउँछ नि: शुल्क यो मनमोहक गन्तव्य खोजी गर्न को लागी एक तरीका खोज्दै। यहाँ केहि महान निःशुल्क आकर्षणहरु शहर मा उपलब्ध छ कि तपाइँको चासो piqued र तपाइँको वालेट खुशी हुनेछ।
पिकासोले उनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण वर्ष बार्सिलोनामा बस्ने - एक कलाकारको रूपमा उनको प्रशिक्षक। उनले आफ्नो सारा जीवन भर शहर को बलियो लिंक स्थापित गरे र उनीहरु लाई उनीहरूको संग्रहालय हुन चाहन्थे। 4,251 को चित्रकला द्वारा प्रदर्शित कार्य संग, संग्रहालय को कार्य को सबै भन्दा स्थायी स्थायी संग्रह मध्ये एक छ।
संग्रहालय बार्सिलोनाको ला रिबरामा पाँच नजिक मध्ययुगीन महलहरुमा राखिएको छ र बार्सिलोना मा मन्टस्डा स्ट्रीट मा स्थित छ। संग्रहका हाइलाइटहरू उनको दुईवटा पहिलो प्रमुख कार्यहरू, पहिलो कम्यूनिन (एक्सएनएमएक्सएक्स), र साइंस र चार्नेस (1896) समावेश गर्दछ। यो संग्रहालय बार्सिलोनाका प्रधान आकर्षणहरू मध्ये एक हो, र त्यहाँका ठाउँहरू जहाँ तपाईं निःशुल्क हेर्न सक्नुहुन्छ। 1897 बाट बिहीबार अफगानिस्तान:6देखि 00:9र प्रत्येक महिनाको पहिलो आइतबार पिकासोका प्रसिद्ध कार्यहरू हेर्न पूर्ण रूपमा निःशुल्क प्रविष्टि हो।
बार्सिलोनाको सबैभन्दा लोकप्रिय स्ट्रीट एक पर्यटन चुम्बक र कातालान संस्कृतिमा एक सञ्झ्याल, सांस्कृतिक केन्द्र, थियेटर र भव्य वास्तुकला संग। विमान रूखहरू द्वारा फ्ल्याक, ला रम्बालाको मध्य सेक्शन एक व्यापक पैदल यात्री ब्रुइडर्ड हो, समाजको व्यापक क्रस-सेक्शन संग हरेक घडी सम्म हरेक दिन हिड्छ। क्षेत्र रेस्टुरेन्टहरू, बारहरू, भण्डारहरू, र भित्ता प्रदर्शनकर्ताहरू (संगीत, मिम, मूर्तिहरू, आदि) बाट भरिएको छ। यो संस्कृति र मनोरञ्जनको केन्द्र हो, र यो खिचाइमा हिंड्न र उत्साह अनुभव गर्न पूर्ण रूपमा मुक्त छ।
Mercat de la Boqueria संभवतः ला रम्बलाको सबैभन्दा रोचक इमारत हो किनभने भोजन बजार भित्र। बार्सिलोनाको सबैभन्दा मुख्य उत्पादन बजार युरोपमा सबैभन्दा ठूलो आवाज, गन्ध र रङ सेन्सरहरू मध्ये एक हो। यो फलफूल र सब्जी को सबै अमीर र विविध आश्रय संग फैलन्छ, र समुद्र को critters, sausages, चीज, मासु र मिठाई को प्रतीत रूप देखि सीमित सीमाहरु। केहि शब्दहरु अनुसार, 1217 पछि यस स्थान मा एक बजार भएको छ, र आज पनि यो एक पर्यटक आकर्षण को आफ्नो दाहिने तिर छ, यो सधैं ठाँउ हो जहां स्थानीयहरु लाई दोकान मा आउँछ। धेरै बार्सिलोनाका शीर्ष रेस्टुराउन्टर्सले आफ्ना उत्पादनहरू यहाँ खरीद गर्छन्, जुन बजारको प्रस्तावको गुणस्तरका लागि भोटहरू। यो अनुभव गर्न एक रोचक स्थान हो, र विन्डो सपिङ्गले चीज खर्च गर्दैन।
Catedral de बार्सिलोना
अधिकांश पर्यटकहरू साग्राडा फेलियाियालाई भेट्न बार्सिलोनामा आए, जुन यात्राको लागि राम्रो छ, तर तपाईंलाई बार्सिलोनाको अर्को क्याथेराल अन्वेषण गर्न केही समय पनि खर्च गर्नुपर्दछ। 13 सदीमा निर्मित, दितेल डे ला बार्सिलोना युरोपमा गॉथिक शैलीको आर्किटेक्चरको सबैभन्दा राम्रो उदाहरण हो र यसमा प्रवेश गर्न नि: शुल्क छ! बार्सिलोनाको उत्कृष्ट ग्वाथ कैथेड्रलको निर्माणले रोमनेसेक मंदिरको साइटमा 1 मई 1298 मा सुरु गर्यो।
यो कार्य 150 वर्ष भन्दा बढी तीन चरणहरूमा गरियो। सुन्दर कैथेड्रलले प्रत्येक वर्ष तीन लाख पर्यटकलाई पाउँछ। यसको गॉथिक कला, शानदार गॉथिक र बाराक altarpieces, यसको अद्भुत गौतम, बप्तिस्मा र सेन्ट ईलियल को क्यूचर सबै पर्यवेक्षकहरूको लागि स्पष्ट छ।
नि: शुल्क पैदल यात्रामा सामेल हुनुहोस्
त्यहाँ धेरै साना स्थानीय कम्पनीहरू छन् जसले बार्सिलोनामा निःशुल्क हिड्ने भ्रमणहरू प्रदान गर्दछ, त्यसैले यो शहरसँग परिचित र शीर्ष स्थानहरू पत्ता लगाउन ठूलो (र कम मूल्य) बाटो हो। संख्या सस्तो पर्यटन र बार्सिलोनामा गतिविधिहरू पनि उनका लागि उपलब्ध छन् जुन एक सानो मूल्य तिर्न पनि इच्छुक छन्।
Passeig de Gracia मा हिंड्नुहोस्
ग्रिसियाको छिमेकीको वरिपरि यो हिँड बार्सिलोनामा सबैभन्दा लोकप्रिय सडक र फुटपाथ मध्ये एक हुन सक्छ। मार्गमा ग्वाडीको कामको शहरका थुप्रै उत्कृष्ट उदाहरणहरू छन् - कास बट्टोलो र कासा मिलिया - र धेरै भन्दा धेरै ल्यान्डस्सी र अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डहरू। यो बाटो हिंड्न र साइटहरू भ्रमण गर्न निःशुल्क छ यो इनामदायी यात्रा।
आर्क डे ट्रिमोफ भ्रमण गर्नुहोस्
बार्सिलोना मा अर्को आर्किटेक्चरल हाइलाइट आर्के डे ट्राइमफ हो, तर यो तपाइँको मानक विजय आर्क छैन। अरू युरोपेली विजयी द्वारबाट प्रेरित हुँदा यो विशेष रातो ईंट विशाल को एक्सएनएनएक्सएक्सएक्स बार्सिलोना विश्व मेला भ्रमणका लागि प्रवेश द्वारको रुपमा निर्माण गरिएको थियो। संरचनाको विवरण प्रशंसा गरेर यो राम्रो तरिकाले रोक्न योग्य छ र यो निःशुल्क छ।
नि: शुल्क भाषा एक्सचेंजमा सामेल हुनुहोस्
नयाँ संस्कृतिको अनुभव गर्ने सबैभन्दा मजाक तरिका हो कि तपाई त्यहाँ त्यहाँ केही भाषा सिक्न हो। नि: शुल्क भाषा एक्सचेंजमा सामेल गरेर तपाइँ एक व्यक्तिसँग अनुभव साझा गर्न सक्नुहुनेछ जुन तपाईं सदाको लागि सम्झनुहुनेछ, तपाईले अरूलाई पनि मद्दत गर्नका लागि उनीहरूको भाषाको क्षमताहरू अभ्यास गर्न सक्नुहुनेछ।
एल बर्न सांस्कृतिक केन्द्रमा रोमन रिम्यान्स हेर्नुहोस्
यदि गॉथिक क्वार्टरको इतिहास तपाईलाई उत्प्रेरित गर्न पर्याप्त छैन भने एल बर्न सांस्कृतिक केन्द्र भित्र केही समय बिताउन निश्चित हुनुहोस् जहाँ तपाइँ भर्खरै बरामद भएका अवस्थितहरू र शहरको रोमन अवधिको निर्माण भवनहरू फेला पार्नुहुनेछ।
अविश्वसनीय रूप देखि यो शहर मा सबै भन्दा पुरानो बजार हॉल मध्ये एक को भित्र हो, र घर को तल दुई हजार साल को साक्ष्य को देखने को लागि, पसलहरु, र क्लासिक फ्लैग को किनारों को मन को उडाने, र पनि राम्रो छ, यो नि: शुल्क छ!
लोकल संग पार्टी
बार्सिलोना केवल ऐतिहासिक र सांस्कृतिक छैन, यो पनि रोमाञ्चक र जीवंत छ। यस गतिशील शहर मा रात्रि जीवन को शहर को केन्द्र को सलाखों र क्लबहरु नजिकै को समुद्र तटहरुमा दलों देखि पर्दछ। किन धेरै आश्चर्यचकित मध्ये एक छैन बार्सिलोना मा पार्टी हस्टल जहाँ तपाइँ सँगी साथीहरूसँग भेट्न सक्नुहुन्छ, र त्यसपछि केही नयाँ साथीहरू बनाउन रातको पट्टीको दृश्यमा उपस्थित हुनुहोस्।
अक्टोबर 12, 2019 + इनपुट, युरोप, खाद्य र पेय, मुख्य मार्ग, व्यञ्जनहरु, स्पेन
6 सुख्खा ñora मिर्च वा4एन्चो मिर्च 1 1 /2औंस कुल; 50g, वैकल्पिक; नोट हेर्नुहोस्
1 /2कप (120mextra- कुंवारी जैतुनको तेल
5 मध्यम लौंग लसुन minced
4 मध्यम पहेलो प्याज 1.5 पाउन्ड / 600g, बारीक पासा
एक ठूलो (8-औंस / 225g मिर्च डाँठिएको, रोपेको, र बारीक पाकेको
एक ठूलो (8-औंस / 225red काली मिर्च) डाँठिएको, रोपेको, र बारीक पाकेको
एक मध्यम (10-औंस / 285leek सेतो र हल्का हरियो भाग मात्र, राम्रोसँग धोइन्छ र पातलो पनी
Paella को लागी:
1 /4कप (60mextra- कुंवारी जैतुनको तेल
3 कुखुराको खुट्टा 13/4पाउन्ड; 800g, फिला र ड्रमस्टिकहरू विभाजित
6 पोर्क टेंडरलिन पदकहरू लगभग 1 1 /4पाउन्ड / 565g कुल
1 /4औंस 7Spनिश chorizo, ठूलो पासामा काटियो (लगभग 1 /2कपमा
एक (14.5-औंस; 411 पूरा खुलेको टमाटर, हातले कुल्चे वा प्युरीमा मिश्रित
1 चम्मच मीठो स्मोक्ड स्पेनिश पेप्रिका pimentón dulce
ठूलो पिन्च केसर
7 कपहरु 1.65L उम्लिरहेको तातो सेतो कुखुराको स्टक वा कम-सोडियम ब्रोथ, तरकारीहरू स्टक, वा पानी, साथै अधिक आवश्यक रूपमा
2.5 कपहरु (17 1 /2औंस; 495Sort-अनाज स्पेनिश चावल जस्तै बोंबा र Calasparra
12 littleneck clams चिसो नुनको पानीको बहु परिवर्तनमा भिजाउँनुहोस् जबसम्म कचौराको फेदमा कुनै बालुवा पाउन सक्दैन
15 सिपी कीरा दाह्री हटाइयो
1 /4पाउन्ड (115lag शेलिंग झींगा
लेमन वेजहरू सेवाको लागि
सोफ्रिटोका लागि: सुक्खा मरिचहरू राख्नुहोस् (यदि एक मध्यम हिटप्रूफ कचौरा प्रयोग गरिएमा र उमालेको पानीले कभर गर्नुहोस् (यदि प्रयोग गरिरहेको छैन भने, चरण3मा स्किप गर्नुहोस्)। काली मिर्चलाई डुब्न सहयोग गर्नको लागि माथि तौल वा भिजे कागज तौलिया राख्नुहोस्।
Peppers पूर्ण रूपमा नरम नभएसम्म खडा गरौं, 30 मिनेट 1 घण्टा। यदि खुर्सानी धेरै जिद्दी छ (मोटा छाला भएको ओराज हुन सक्छ), पानीलाई भित्र छिर्न दिन तपाईंले तिनीहरूलाई एउटा सानो प्वाल च्याप्न आवश्यक पर्दछ।
काली मिर्च निकाल्नुहोस् र काण्ड र बीउहरू खारेज गर्नुहोस्। एक प्यारी .्ग चक्कुको प्रयोग गरेर, सावधानीपूर्वक छालाबाट मासु स्क्र्याप गर्नुहोस्। छाला रद्द गर्नुहोस्।
एक3- क्वार्ट सॉस प्यानमा, चम्किलो नभएसम्म मध्यम उचाइ माथि तातो तेल। लसुन, प्याज, हरियो मिर्च, रातो मरिच, लीक, र स्क्र्याप्ड पुनःहाइड्रेटेड मिर्च मांस (यदि प्रयोग गर्दैछ), हल्का हल्का नुनको साथ, र पकाउनुहोस्, चलाउनुहोस्, जब सम्म तरकारीले आफ्नो तरल जारी नगरीकन तलको तल हल्का खैरो गर्न थालेको छ। प्यान, लगभग 10 मिनेट।
मध्यम तल्लो तल्लो तातो र खाना पकाउन जारी, स्ट्रिra र अक्सर स्क्र्यापिंग, सोफ्रिटो स्वादको लागि मिठो नभएसम्म र गहिरो सुनहरा खैरो रंगको, लगभग 45 मिनेट लामो। तपाईंसँग2कप हुनुपर्दछ।5दिन सम्म तपाईं एयरटिक कन्टेनरमा सोफ्रिटो फ्रिज गर्न सक्नुहुन्छ।
पाउलाका लागि: यो निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंको ग्रिल सतह सतहमा छ। कोइलाले भरिएको एउटा चिमनी लाईट गर्नुहोस्। जब सबै कोइला जलाइन्छ र खरानी खरानीले ढाकिएको छ, कोइलाको ग्रेरेटमा बराबर गरी कोइलामा खन्याउनुहोस् र फैलाउनुहोस्। ठाउँमा खाना पकाउने ग्रेरेट सेट गर्नुहोस् र त्यसमा माथिको 17-इंच पाउला प्यान सेट गर्नुहोस्।
प्याला प्यानमा तेल थप्नुहोस्, यसलाई लामो मेटल स्प्याटुलाको साथ वरिपरि धकेल्नुहोस् (स्टेनलेस स्टील वोक स्प्याटुलाले हर्टो कोट पूरै सतहमा राम्रोसँग काम गर्न सक्दछ, र तेल हल्का धुम्रपान नगरेसम्म तातो गर्नुहोस्।
सीजन कुखुरा र सुँगुरमा नुनको साथ सबै, त्यसपछि प्यानमा थप्नुहोस् र पकाउनुहोस्, मोड्नुहोस्, दुबै छेउमा गहिरो ब्राउन नभएसम्म, लगभग 8 मिनेटहरू। सुँगुरको थालमा स्थानान्तरण गर्नुहोस् र कुखुराको पनमा छोड्नुहोस्, कुखुराको टुक्राहरूलाई बाहिरी किनारमा धकेल्नुहोस्।
पोरमा चोरिजो थप्नुहोस् र खाना बनाउनुहोस्, चलाउनुहोस्, जब सम्म फ्याट रेन्डर गर्न सुरु हुँदैन। टमाटर प्यूरी, सोफ्रिटो, पेप्रिका, र केसर थप्नुहोस्, र खाना बनाउनुहोस्, टमाटर सास मध्यम ब्राउन नभएसम्म, उत्तेजक र स्क्र्याप गर्नुहोस्, लगभग2मिनेटहरू।
स्टक थप्नुहोस् (वा वाटेन्ड रोलिंग फोकामा ल्याउनुहोस्। नुनको साथ हल्का सीजन। चामलमा सबै नै छर्कनुहोस्, निश्चित गर्नुहोस् कि सबै अनाज डूबिएको छ र कुनै पनि कुखुराको टुक्राहरू माथि टकिएको छैन। तपाईंको स्पाटुला प्रयोग गरी हल्का तरल पदार्थ घुमाउनुहोस्। चामललाई समान रूपमा वितरण गर्नुहोस्। फोडामा फर्कनुहोस्।
नेस्ले क्लैमहरू र तरल पदार्थमा कुकुरहरू र कुक, 8 मिनेटको लागि, बिना चलायको। पाउला प्यानमा झिंगाटा थप्नुहोस् र यसमा सुँगुरको मासु पनि फिर्ता गर्नुहोस्, टुक्रालाई तल पकाउँदै भातमा राख्नुहुन्छ।
यस बिन्दुमा, तपाईको ग्रिलको तातोमा निर्भरता, तपाईले गर्मी स्रोतबाट आफ्नो दूरी बढाउनको लागि प्याला उच्च माथि उठाउन चाहानुहुन्छ र यो तल बर्न सक्ने सम्भावना कम गर्नुहुनेछ (तपाईको ग्रिल यति टेपेड नभएसम्म प्याला हो मुश्किल सेमेरि .्ग, तपाईं यो गर्न चाहानुहुन्छ)।
यो गर्नको लागि, प्याला प्यान ध्यानपूर्वक ग्रिलबाट लिफ्ट गर्नुहोस् र या त व्याडेड-अप एल्युमिनियम पन्नी सेट गर्नुहोस् वा, अझै माथि लिफ्टको लागि, ईंटहरू, ग्रिल ग्रैटमा (यसले अर्को व्यक्तिको यस चरणमा तपाईंलाई मद्दत गर्न मद्दत गर्दछ)।
प्याला प्यानलाई ग्रिलमा फिर्ता सेट गर्नुहोस् र खाना पकाउनुहोस् जब सम्म चावल मात्र अल डेन्टेट हुन्छ र तरल पूर्ण रूपमा अवशोषित हुन्छ, लगभग 8 मिनेट लामो; यी दुबै छेउमा तताउनको लागि यस समयमा एक पटक क्लमहरू, सिपीहरू, झिंगा, र पोर्क फेर्नुहोस्। यदि तरल पदार्थ पकाउँदछ र चामल पर्याप्त काम गर्दैन भने, चामल इच्छित दानमा नपुगुन्जेल थप उबलते-तातो स्टक वा थोरै थपमा पानी थप्नुहोस्।
तपाईं पनि एक चम्चा प्रयोग गर्न सावधानीपूर्वक paella मा खन्न र प्यान को तल जाँच गर्न सुनिश्चित गर्न को लागी केहि पनि जलेको छैन।
जब चामल राम्ररी पकाइन्छ र तरल पूर्ण रूपमा अवशोषित हुन्छ, तातोबाट हटाउनुहोस् र निम्बूको पन्जासँग सेवा गर्नु अघि 10 मिनेट आराम गर्नुहोस्।
क्याम्बरट पाकेको गाईको दुध पनीर हो जुन ब्रीसँग मिल्दोजुल्दो छ (अर्को पनीर जुन यस थालमा प्रयोग गर्न सकिन्छ)।
हामी क्याम्बरबटको धनी स्वाद र बनावट रातो currant वा अतिरिक्त कालो currant संरक्षितको हल्का मीठो तर Tart अम्लता संग सन्तुलित तरिका मनपराउँछौं। जर्मन संरक्षकहरू असाधारण गुणवत्ताको छन् र यसको ताजा, फलफूल स्वाद छ। तपाईं कुनै ब्रान्ड प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईंको मनपर्ने स्वादहरूसँग प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै रास्पबेरी-रातो currant मिश्रण, कालो चेरी, वा कुनै अन्य मीठा-टार्ट जाम।
क्यामबर्ट प्राय: 4.5-औंस राउन्डहरूमा आउँदछ, र तपाइँ प्रति अतिथि एक राउन्ड सेवा गर्न सक्नुहुनेछ, वा प्रत्येक राउला वेजमा काट्नुहोस्। संरक्षकको एक गुच्छा र अजमोदको एक बिट संग शीर्ष, यी पनि एक डिनर पार्टी वा ककटेल रिसेप्शन को लागी आदर्श औंला खाना बनाउँछ। साधारण रूपमा ब्रेडिंग अघि गोल काट्नुहोस् र त्यसपछि नुस्खाको साथ अगाडि बढ्नुहोस्। यो विशेष अवसर ब्रन्चहरू जस्तै आमाको दिन वा स्नातकहरूको लागि पनि उत्कृष्ट विकल्प हो।
4 राउन्ड क्याम्बरट चीज चीज 4.5 औंस प्रत्येक
2 कपहरु आटा
2 ठूला अण्डाहरू
1 /2कप सम्पूर्ण दुध
2 कपहरु सादा ब्रेडक्रमहरू
2 tablespoons अतिरिक्त कुंवारी जैतून का तेल
2 tablespoons अज्ञात मक्खन
8 औंस जर्मन रातो currant राख्छ
गार्निशको लागि अजमोद
Preheat ओवन 450 डिग्री एफ।
पिठो उथला डिशमा राख्नुहोस्। एक दोस्रो उथले थालमा, एगवाश सिर्जना गर्न अण्डा र दूध चाबुक गर्नुहोस्। रोटी क्रुम्ब्स तेस्रो उथले थालमा राख्नुहोस्।
आटामा क्यामबर्टको पहिलो राउण्ड ड्रेज गर्नुहोस् र निश्चित गर्नुहोस् कि यो पूर्ण रूपमा लेपित छ।
क्यामबर्ट हटाउनुहोस् र सबै थप आटा बन्द ट्याप गर्नुहोस्।
एन्डवाशमा फ्लोरिएको राउन्ड राख्नुहोस्। पूर्ण रूपमा अण्डाको साथ यसलाई कभर गर्नुहोस्।
एन्डवाशबाट क्याम्बरट निकाल्नुहोस्, कुनै थप थप्नको लागि यसलाई हल्का हल्लाउँदै, र यसलाई ब्रेडक्रम्ब्स सहितको कचौरामा राख्नुहोस्।
पूर्ण रूपमा ब्रेडक्रम्बहरूमा राउन्ड कभर गर्नुहोस् र त्यसपछि यसलाई थालबाट हटाउनुहोस्, सबै थप ब्रेडक्रमहरू हटाउन चीजलाई ट्याप गर्दै।
राउन्डको साथ प्रक्रिया दोहोर्याउनुहोस् ताकि यो डबल-ब्रेड हो, र त्यसपछि सम्पूर्ण प्रक्रिया दोहोर्याउनुहोस् क्याम्बरटको बाँकी राउन्डहरूको साथ।
फ्रिजमा ब्रेडड राउन्डहरू राख्नुहोस् जब तपाईंले पनी तयार पार्नुहुन्छ। यो महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईं छिटो सर्नुहोस्, किनकि तपाईं चाहनुहुन्न कि ब्रेडक्रस सुगी होस्।
उच्च तातोमा मध्यम साटो प्यानमा जैतुनको तेल र माखन पिसाउनुहोस्। फ्रिजबाट पहिलो क्याम्बरट फेरी हटाउनुहोस् र यसलाई तातो साटा प्यानमा राख्नुहोस्।
यो प्रत्येक पट्टि हल्का सुनहरा खैरो नभएसम्म, प्रत्येक तिर 1 मिनेट सम्म साउट गर्नुहोस्। बाँकी राउन्डहरूको साथ प्रक्रिया दोहोर्याउनुहोस्।
राउन्डहरू तपाईंको प्रिहेटेड ओभनमा राख्नुहोस् र क्याम्बरबर्ट नरम नभएसम्म5देखि7मिनेटसम्म पकाउनुहोस्।
यस बीचमा, मध्यम मध्यम साटा प्यानमा राख्नुहोस् र उच्च तातो माथि तातो।
प्रत्येक सेवा गर्ने प्लेटमा एक गोल राख्नुहोस्। बेक्ड क्याम्बरटको छेउमा प्लेटमा न्यानो संरक्षणहरू चम्चा।
अजमोदको साथ प्रत्येकको शीर्ष गार्निश र तुरुन्त सेवा गर्नुहोस्।
कोपेनहेगन एक आश्चर्यजनक सुन्दर शहर हो, र विशेष गरी छुट्टीको मौसममा उत्कृष्ट छ। हामी केवल एक दिनको लागि कोपेनहेगन गएका थियौं, तर तपाईंले यस महान शहरको आनन्द लिन केहि गर्न सक्नुहुने केही महान चीजहरू फेला पार्नुभयो - 24 घण्टा भन्दा कम समयको लागि पनि!
हाम्रो लागि, डिसेम्बरको सुरूमा भ्रमण बुडापेस्ट र नाइसको बीचमा लामो लिओभरमा यात्रा गर्दा उत्तम थियो। चिसो, र मौसम blustery, रातको समय वास्तविक आकर्षण थियो र क्रिसमस सहरमा जीवित भएको थियो जब एक समय - एक विश्व-प्रतिष्ठित मनोरंजन पार्क उल्लेख छैन!
कोपेनहेगन भ्रमण गर्दा, तपाईं नहर जिल्ला मा रहन चाहानुहुन्छ - Nyhavn राम्रोसँग चिनिने क्षेत्र। त्यहाँ यस क्षेत्र मा एक टन महँगो विकल्पहरू छन्, जाडोमा पनि, कोपेनहेगन पक्कै भ्रमणको लागि सस्तो शहर होइन।
जहाँसम्म, केहि खोज पछि, हामी एक अद्भुत होटेल फेला पार्दछौं सीधा Nyhavn मा नहर मा भनिन्छ होटल बेथेल। यो प्रति रात $ 100 अमेरिकी डलर वरिपरि एउटा होटल फेला पार्न राहत थियो जुन विशाल, आरामदायक, र सुपर स्वच्छ थियो। स्पष्ट भन्नुपर्दा हामीले खुसीसाथ होटलको लागि तिर्ने दुई पटक तिर्ने थियौं र अझै पनि क्षेत्र मा रहन के यसको लागि पैसा बचाईयो!
त्यहाँ अन्य होस्टल विकल्पहरू र साना होटलहरू कोपेनहेगनमा बस्नको लागि छन्, तर एक जोडी आफैंले एक रातको लागि यात्रा गरे, होटल बेथेल सिद्ध थियो! हामी युरोपमा बसेका सबैभन्दा राम्रा कोठामध्ये एउटा एकदम सहज आरामदायक होटेल बाहेक, त्यहाँ हाम्रो भोजमा समावेश भएको एउटा ठूलो ब्रेकफास्ट बुफे इन्साइट थियो!
Nyhavn मा कसरी पुग्ने
Nyhavn प्राथमिक पर्यटक ड्र हो, र यो एयरपोर्टबाट टाढा छैन। त्यस दिमागमा, धेरैले सोच्दछन् कि ट्याक्सी लिनु एकदम राम्रो छ। जहाँसम्म, कोपेनहेगनमा नहरहरू राखिएको तरीकाले यसले ट्राफिकलाई कठिन बनाउँछ। वास्तवमा, 10 माईल कार सवारी भीडको समयमा एक घण्टा भन्दा राम्रो लाग्न सक्छ!
त्यो भनिएपछि, सार्वजनिक यातायात कोपेनहेगनमा उत्कृष्ट छ - यूरोपका अधिकांश ठूला शहरहरूमा जस्तो हुन्छ। भूमिगत मेट्रो प्रणाली छिटो र सस्तो छ!
सबैभन्दा राम्रो पक्ष भनेको नहरको नजिकको मेट्रो स्टेसनको निकटता हो, कोन्जेन्स न्यटोरभको साथ (मेट्रो स्टेशन - माथिको नक्शामा जुम आउट गर्नुहोस् र बायाँ / पश्चिमतर्फ हेर्नुहोस्) प्राथमिक नहरबाट केवल 100 गज दूरीमा र एक भन्दा कममा अवस्थित छ। होटल बेथेलबाट5मिनेट पैदल।
कामहरू कोपेनहेगनमा गर्न
यदि तपाईं एक रात कोपेनहेगनमा बसिरहनुभएको छ भने तपाईंसँग एक लाख काम गर्न समय छैन, तर तपाईं निस्सन्देह तपाईंको बसाईको मजा लिन पर्याप्त गर्न सक्नुहुन्छ। जे भए पनि, यो एक महान सहर हो जुन सुन्दर छ, ठूलो खानाको साथ, र स्कान्डिनेभियाको कुनै पनि ठूलो शहरको उत्तम दृश्यहरू!
यो सायद तपाईले कोपेनहेगनमा गर्नु पर्ने एक एकल कुरा हो किनकि स्पष्ट रूपमा तपाईले कहिँ पनि पाउन सक्नुहुन्न।
टिवोली गार्डेनहरू वास्तवमै एक अद्वितीय मनोरञ्जन पार्क हो जुन नेहाभनबाट केवल एक 10 मिनेट पैदल दूरीमा अवस्थित छ। यो वास्तवमै सपनाको दृश्य हो - छुट्टीको अद्भुत ठाउँ जुन छुट्टीको मौसममा जीवित हुन्छ। हामीले भ्रमण गरेको रात कत्ति चिसो भए पनि, टिभोली त्यस्तो चीज हो जुन हामीले भ्रमणको निम्ति यात्रा ग and्यौं र साँच्चिकै ठूलो समयको साथ पुरस्कृत गरियो।
Tivoli 1843 मा खोलियो, र आज 2nd संसारको सब भन्दा पुरानो मनोरंजन पार्क हो -4spiraling रोलर-कोस्टर, स्विंग राइड्स, रेस्टुरेन्ट, carousels, र चाखलाग्दो वास्तुकला र प्रदर्शन को एक होस्ट सहित! गर्मी र वसन्तमा, टिभोली थप राम्रा फूलहरू र सुन्दर प्राकृतिक ल्याण्डस्केपि forका लागि पनि परिचित छ।
रातमा भ्रमण गर्दै, ट्रेसी विशेष गरी 2004 मा बनेको “दानव” माथिकोबाट कोपेनहेगनको रात्रि दृश्यका बारे उत्साहित थिए!
हामी कोपेनहेगनमा फर्केर हेर्दैछौं कि केवल ग्रीष्म Tतुमा टिभोलीको दिन कस्तो देखिन्छ - हेर्न को लागी विशाल भीड र लामो लाइनहरू जुन सवारीले शहरको सब भन्दा लोकप्रिय समयमा देखाउँदछ।
जाडोको समयमा कोपेनहेगन र वर्षको कुनै पनि अन्य समयमा कोपेनहेगन देख्ने प्रमुख रेखा शहरको डट गर्ने सुन्दर क्रिसमस मार्केटहरूको लागि हो।
जबकि हामी पूर्ण रूपमा क्रिष्टमस बजारहरू बाहिर सूचीबद्ध गर्न सक्दछौं, त्यो अर्को पोष्टको लागि अर्को विषय हो। यसो भन्नु पर्याप्त छ, यदि तपाइँसँग एक दिन जाडो महिना कोपेनहेगनमा छ भने, यदि तपाइँ नेहाभनमा रहनुभएको छ भने तिनीहरूलाई सम्झनु साँच्चिकै गाह्रो छ। शहरको प्राथमिक क्रिसमस बजारहरू व्यावहारिक रूपमा नेभ्न क्षेत्रबाट बाहिर निस्किन्छ, जहाँ नहरको डकहरू क्रिसमस पसलहरू, सुन्दर बत्तीहरू र आकर्षणहरूले भरिएका हुन्छन्।
वर्षको यस समयमा रातमा, कोपेनहेगन समृद्ध खाना, mulled वाइन, र पेस्ट्री भरिएको गन्ध!
निस्सन्देह, क्रिसमस बजारहरूमा भ्रमण गर्नुहोस् यदि तपाईंसँग कोपेनहेगनमा एक रात मात्र छ भने तपाईंले गर्नै पर्छ।
हामीले यस बारेमा पहिले नै तपाईको क्षेत्रको बारेमा कुरा गरिसकेका छौं गर्नुपर्छ रहनुहोस्, तर यदि केहि भयो भने तपाइँ नेहाभनमा तपाइँको बजेट भित्र ठाउँ फेला पार्न सक्नुहुन्न, यो अझै पनी एक ठाउँ हो जहाँ तपाइँले अवलोकन गर्नुपर्नेछ।
मानिसहरू कोपेनहेगनको बारेमा सोच्दा यो उनीहरूको सोच हुन्छ - बहु रंगीन भवनहरू जुन सुन्दर नहरहरूलाई रेखा दिन्छ। सडकहरू बुटीक होटेल, साना रेष्टुरेन्टहरू, पसलहरू, र युरोपको कुनै पनि ठूलो सहरमा सब भन्दा सुन्दर पैदल यात्रा गर्दछ।
परम्परागत स्क्यान्डिनेभियन फूड
स्क्यान्डिनेभिया तपाईले सोच्न सक्ने ठाउँ होईन जब तपाई संसारको सर्वश्रेष्ठ पाक कलाको कल्पना गर्नुहुन्छ, तर यदि तपाई छुट्टिहरूमा जानुहुन्छ भने तपाई युरोपको केही उत्तम खानाले चकित पार्न सक्नुहुन्छ।
मलाई विश्वास गर्नुहुन्न? हाम्रो जीवनको सब भन्दा राम्रो खाना मध्ये एक रात कोपेनहेगनमा रहेको थियो - एक स्याउको चटनीमा अचारको हेरी withसहित, सुन्दर क्रिसमसको सजावट, र फ्रान्क सिनाट्रा पनि पृष्ठभूमिमा खेल्दै! यदि तपाईं छुट्टीको मौसममा यात्रा गर्दै हुनुहुन्न भने, प्रयास गर्नका लागि केहि उत्कृष्ट डेनिश खाना समावेश गर्दछ:
Flæskesteg, रोस्ट पोर्कको डेनिस संस्करण, डेनमार्कको प्रमुख राष्ट्रिय भाँडा मध्ये एक हो, र जुन प्राय: छुट्टीहरूमा दिइन्छ।
A डेनिश पेस्ट्री, वा तपाइँ केवल डेनिस को रूप मा थाहा सक्छ के एक स्तरित र laminated मिठाई पास्टी हो कि अक्सर जेली, मुरब्बा, वा अन्य मीठो भरने को साथ भरिन्छ।
फ्रिकैडेलर डेनिस मीटबलहरू हुन्, जुन घुमाउनुको सट्टा समतल र पात-फ्राइड हो, र प्राय: बेरीमा आधारित मीठो ग्रेवी वा सस (जस्तै लिजेनबेरी) को साथ प्रस्तुत गर्दछ।
A टार्टलेट एक बेक्ड, शॉर्टस्ट्र्याट पेस्ट्री हो, भर्नको साथ जुन मीठो वा स्याउरी हुन सक्छ, यद्यपि आधुनिक टार्ट्स प्राय: फलमा आधारित हुन्छन्, अक्सर कस्टर्डको साथ।
के तपाईंलाई थाहा छ कोपेनहेगन प्रसिद्ध लेखक र द लिटिल मरमेडका निर्माता हंस क्रिश्चियन एन्डरसनको पूर्व घर पनि हो?
एन्डरसनको प्रख्यात कार्यको सम्मानमा,aउही नामको मूर्ति 1913 मा नहर जिल्लामा निर्माण गरिएको थियो, र कोपेनहेगन कुनै पनि यात्राको समयमा प्राथमिक "चौकि" मध्ये एक रहन्छ। निश्चित गर्नुहोस् कि नेहाभनको टहलमा रोकिनुहोस्, र यस प्रसिद्ध माछाको साथ तस्वीर लिनुहोस्!